गोलभेडा ३० रुपैयाँ किलोमा किनेर पाउकै ३० मा बेच्छन् खुद्रा व्यापारी – Koshidaily
गोलभेडा ३० रुपैयाँ किलोमा किनेर पाउकै ३० मा बेच्छन् खुद्रा व्यापारी
access_alarms Koshi daily २३ चैत्र २०७६, आईतवार ०७:३८	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं : काठमाडौंमा हिजो आज तरकारीको भाउ छोइनसक्नु छ। लकडाउनको मौका छोपेर खुद्रा व्यापारीले मनलाग्दी भाउ राखेर तरकारी विक्री गरिरहेका छन् । बल्खु, कालिमाटी, बानेश्वर लगायत तरकारी बजारबाट सस्तोमा तरकारी उठाएर खुद्रा व्यवासायीले महंगोमा विक्री गर्ने गरेका छन्।
घरछेउको पसलमा तरकारी महँगो भएपछि मानिसहरू नजिकका ठूला तरकारी बजार धाइरहेका छन जसले गर्दा बल्खु, कालिमाटीलगायत बजारमा विहान, बेलुकी थामि नसक्नु भीड हुन्छ। तरकारी बजारमा अव्यवस्थित भीडले को;रोना फैलने त्रास व्यवसायीमा छ। सामान्य अवस्थाकै जस्तो भीड किन तरकारी बजारमा भइरहेको छ?
व्यवसायीहरूका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले महँगीमा तरकारी बेचेका छन्, त्यसको असर तरकारी बजारमा देखियो। एक किलो तरकारी किन्न पनि मानिसहरू बल्खु, कालिमाटी धाए । ‘यहाँबाट सस्तोमा तरकारी लगेर महँगीमा विक्री गर्छन् त्यसैले थामि नसक्नु भीड भएको छ,’ बल्खुस्थित तरकारी बजारका व्यवसायी रामकुमार शिवाकोटी भन्छन्, ‘प्रतिकिलो ३० रूपैंयाँमा गोलभेडा लगेर खुद्रा व्यापारीले पाउकै ३० मा बेचिदिन्छन्।
सरकारले अनुगमन गर्दैन, के गर्ने?’ उनले किसान र होलसेल गर्ने व्यापारीलेभन्दा खुद्रा व्यापारीले धेरै नाफा लिएको बताए । ‘तरकारी उत्पादन गर्ने किसान मर्ने, होलसेल गर्ने व्यवसायी मर्ने तर खुद्रा व्यवसायी मोटाउने? राज्यले व्यवस्थित गर्नु पर्‍यो। नियमन गर्नु पर्‍यो, अनुगमन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।